စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ်ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Wireless Tuya Smart Life Home Switch ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်၊ သင်သည်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆို WIFI စမတ်ခလုတ်ကိုယူနိုင်သည်။ US/AU Smart Life Alexa Google။
2 နှစ်အာမခံဖြင့် China Wireless Tuya Smart Life Home Switch ကို ဝယ်ယူပါ။
ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch အတွက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
1. ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch နောက်တွင်မဟုတ်ဘဲ L1 မီးအိမ်၏ L နှင့် N ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချိတ်ဆက်ထားရမည်၊
ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch အတွက် သတိပေးချက်
ခလုတ်လျှပ်စစ်ရှိသည့်အခါ မှန်ဘောင်ပေါ်တွင် အဖုံးမထားပါ။
ဖန်သားပြင်သည် လျှပ်စစ်မီးရှိသည့်အခါ အဖုံးကိုဖွင့်ထားသည်။ ထို့နောက် switch အလုပ်မလုပ်ပါ။
သင့်အိမ်ရှိ ပင်မလျှပ်စစ်ခလုတ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ၊ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပါမည်။
2. အာရုံမခံနိုင်သော အထိအတွေ့ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ
ပြဿနာ- ခလုတ်ခုံသည် အလွန်နက်နဲပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လှည့်ထားသောကြောင့် နောက်ခံအလင်းဘုတ်နှင့် အကန့်ကြားတွင် ကွာဟမှုဖြစ်စေသည်။
ဖြေရှင်းချက်- သော့ဝက်အူကို အရမ်းနက်အောင် မဆွပါနဲ့၊ အဲဒါကို မရောက်နိုင်ရင် ပိုရှည်တဲ့ဝက်အူနဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ခလုတ်နှင့် အောက်ခြေအကွက်ကြားတွင် တစ်ခုခုဖြည့်ပါ။ ထိလွယ်ရှလွယ်သော အခြေအနေများအတွက် အရပ်မြင့်နေချိန်တွင် အနည်းငယ် အာရုံစိုက်ထားသရွေ့တော့ ဖြစ်ခဲပါသည်။
ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch အတွက် မှတ်ချက်
1.Wi-Fi ခလုတ်တွင် မီးသီးကို မှိန်မှိန်စက် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ မချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ (မီးမှိန်မှိန်စက်ခလုတ်မှလွဲ၍) မှိန်မှိန်စက် လုပ်ဆောင်ချက် မရှိပါ။ မီးအဖွင့်အပိတ်ကိုသာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
2. ခလုတ်ပါဝါသည်0~ 1000W ဖြစ်သည်။ မီးအိမ်၏ပါဝါ 0W ထက်နည်းပါက သို့မဟုတ် 1000W ထက်ပိုပါက၊ ဤခလုတ်ကို မသုံးပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1. relay scheme သည် ပိုမိုတည်ငြိမ်သည် (စျေးကွက်ရှိ switches များထက် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော အတွင်းတွင် relay တစ်ခုပါရှိသည်၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုကြာပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်)။ သာမန်ခလုတ် SCR ထိန်းချုပ်မှုသည် လောင်ကျွမ်းရန်လွယ်ကူသည်၊ အရည်အသွေးမြင့် relay၊ anti-pulse oltage၊
2. မတူညီသောခလုတ်မုဒ်များသည် မတူညီသောမီးများကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch
3. အလင်းရောင်နည်းသော အချက်ပြဒီဇိုင်းသည် မိသားစုအနားယူခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်သည့်အပြင် မှောင်မိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်သည် ရှာရလွယ်ကူပြီး မှင်သက်မသာဖြစ်နေသည်။ 4. [ဝါယာကြိုးမုဒ်]- ကြားနေမီး + တစ်ခုတည်းသော မီး အထွေထွေ ဒီဇိုင်း၊ မည်သည့် မိသားစုမဆို သုံးနိုင်သည် (ကြားနေဝါယာကြိုးဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ သုံးနိုင်သည်)
5. အရည်အသွေးမြင့် ဖန်သားပြင်များကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ကောင်းသောအလင်းပို့လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ သန့်စင်သောအရောင်၊ ကြွယ်ဝသောအရောင်၊ လှပချောမွေ့သောနေ့နှင့်ညအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုကိုထည့်သွင်းပါ၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုကိုမထိခိုက်စေပါ။ ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch
6. timer/scene control ပါရှိသည်။
7. ဘုံထိန်းချုပ်မှုအတွက် မိသားစုနှင့် မျှဝေပါ။
8. Amazon Echo နှင့် Google Home နှင့် Tmall Genie (Tmall Genie) ဖြင့် အသုံးပြုပါ။
ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch အတွက် စက်များစွာဖြင့် အသုံးပြုပါ။
hot Tags:: ကြိုးမဲ့ Tuya Smart Life Home Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်